4 Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo kwaye uzifumane | Iindaba zeGajethi
Kwenzeka ntoni xa iifoto zethu zagcinwa kwi-CD-ROM kwaye yena enamacandelo amabi? Ewe, sinokuqala ukuzisola ngokungakhange senze enye into eyongezelelekileyo, kuba utshilo imifanekiso okanye iifoto zinokubekwa kula "macandelo mabi" ke ngoko akunakwenzeka ukuzama ukuzibuyisela ngokulula. Njengoko sinako lungisa iifoto ezonakeleyo kwezi meko?
Phezulu sibeke umfanekiso onokuba sisiphumo somboniso wewindows ngokubanzi xa ifumana ezi ntlobo zeefayile ezineziphene. Ukuba uzifumene kule meko ilusizi kwaye sele uzilahlile ezi rekhodi apho unayo Inani elikhulu leefoto ezibalulekileyo (usapho okanye umsebenzi) Sicebisa ukuba ufunde inqaku elilandelayo, kuba apha siza kukhankanya usetyenziso olunokusebenzisa ukuzama ukubuyisa iifoto. Enye yazo isimahla, ngelixa ezinye kufuneka zithengiwe, nangona ingxelo yovavanyo inokukhutshelwa ukubona iziphumo kunye nokusebenza kwesixhobo kunye nomsebenzi obekiweyo.
1 Ukuqwalaselwa kwangaphambili ngaphambi kokulungiswa kweefoto ezonakeleyo
2 Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo
2.1 Ukulungiswa kweStellar Phoenix JPEG 2
2.2 Ugqirha wemifanekiso
2.3 Ukulungiswa kweFayile
2.4 Ukubuyiswa kwePix
3 Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo kwi-Mac
3.1 Ukubuyiswa kweefoto zeStellar Phoenix
3.2 Ukubuyiswa kweDatha yeSkysoft
3.3 Ukubuyiswa kweDatha ye-OneSafe
4 Usetyenziso ukulungisa iifoto ezonakeleyo kwi-Android
4.1 Ukubuyiselwa Kwemifanekiso
4.2 Buyisela iifoto
4.3 Buyisa imifanekiso ecinyiweyo
5 Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo kwi-iPhone
5.1 I-EaseUS MobiSaver
Ukuqwalaselwa kwangaphambili ngaphambi kokulungiswa kweefoto ezonakeleyo
Sihlalutya imeko ekhethekileyo esinayo imifanekiso okanye iifoto ezigcinwe kwidiski I-CD-ROM, ezinokuba namacandelo amabi. Le meko inokwenzeka kwakhona kwiifayile ezibanjelwe kwi-USB stick kunye ne-hard drive kwaye, nangona kunjalo, ayinakuboniswa ngokulula nombukeli ngenxa yomonakalo othile ongaqhelekanga osenokuba ubangelwe lusulelo lwekhowudi enobungozi.
Nokuba kwenzeka ntoni ngaphambi kokulungisa iifoto ezonakeleyo, umsebenzisi kufuneka zama ukwenza ikopi yale mifanekiso (iifayile ezimbi) kwenye indawo kwi-hard drive yekhompyuter kuba ukusuka apho, kuya kuba lula kakhulu ukuzama ukubuyisa iifoto ezonakeleyo okanye ukuzilungisa.
Apha ngezantsi uyakufumana uthotho lwezixhobo eziza kukunceda fumana imifanekiso eyonakeleyo.
Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo
Ukulungiswa kweStellar Phoenix JPEG 2
Esi sixhobo sokulungisa iifoto ezonakeleyo sinokusinceda kwinjongo ecetywayo, nangona kuya kufuneka ithengwe ngelayisensi esemthethweni. Ngokwomphuhlisi, isindululo sakhe sinokubakho kokulungiswa kweefayile zemifanekiso ekwifomathi yejpeg kwaye okwangoku, ziboniswa njengonakeleyo okanye ezonakeleyo.
Esi sicelo sinokuba nethuba lokukwazi ukuphinda ufumane ulwazi lwezi foto nokuba inkqubo yokusebenza (Windows) icebise ngemiyalezo eyahlukeneyo, ukuba ifayile yonakele ngokupheleleyo. Ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo, kuya kufuneka ukhethe iifoto (iifayile ezonakalisiweyo) ukuzirhuqa ngaphezulu kwesixhobo esibonakalayo kwaye ucinezele iqhosha ukuqala inkqubo yokubuyisela.
Ngesi sixhobo siza kuba nakho ukubanakho fumana ulwazi kwiifayile zemifanekiso, ebonelela ngezinye iindlela ezingcono zokwenza lo msebenzi. Mhlawumbi ngenxa yeli nqaku, kungenxa yokuba indleko yelayisensi yokuhlawulela ukusetyenziswa kwayo iphezulu kakhulu kunesindululo esisichazile ngaphambili.
Ukusebenza kokusebenza okubonelelwa sesi sixhobo kulungile, kuba iifayile azinakufumaneka kuphela kwifayile ye- jpeg kodwa kwakhona, kwiWindows yemveli (BMP) kwaye nkqu, kuhlobo lwePSD, ukuba yeyona nto ibaluleke kakhulu kwabo basebenza kwiAdobe Photoshop okanye izixhobo ezifanayo zoyilo. Ukuze uqiniseke ngokusebenza kwayo, ungasivavanya isixhobo ngefayile enesiphene kwaye ebaluleke kakhulu, nangona uya kufumana i-watermark kumfanekiso wefayile ebuyiselweyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ugqirha wemifanekiso yenye yezona ndlela zibalaseleyo unokukhetha kuzo fumana iifoto ezonakeleyo.
Ukukhuphela - Umfanekiso kaGqirha 2
Ngokwenyani, le ndlela inikezelwe ekuzameni ukulungisa iintlobo ezahlukeneyo zeefayile, ezingabandakanyi imifanekiso kodwa endaweni yoko, iifomathi ezahlukeneyo ngokupheleleyo. Inzuzo yokuqala kukungakhathali, ukuba lolunye uhlobo lokuqala ekufuneka siqale ukulusebenzisa ukubona ukuba imifanekiso okanye iifayile ezikhohlakeleyo zinepesenti encinci yesisombululo.
Ukungqinelana okusigcina esi sixhobo kubhekisa kuzo zombini iifayile zeefayile kwi jpeg kunye namaxwebhu e-PDF, iifayile zomculo, iifayile zevidiyo, amaxwebhu eOfisi phakathi kwezinye iindlela ezininzi. I-interface ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa kuba kuphela, kufuneka sifumane indawo apho umfanekiso okanye ifayile eyonakeleyo ikhoyo kwaye ucofe iqhosha ukuqala inkqubo yokubuyisela.
Ngaba unayo ukulungiswa kweFayile lungisa iifoto ezonakeleyo?
Ukukhuphela - Ukulungiswa kwefayile 2.1
Enye indlela yokulungisa iifoto ezonakeleyo kufuneka ithengwe ngephepha-mvume elisemthethweni. Ukuhambelana kuyinto ebanzi ngakumbi kunaleyo kunikelwa ngayo zizicelo zangaphambili nangona, zijolise kuphela kwimifanekiso yeefayile ezinamacandelo onakeleyo (onakeleyo).
Ukuhambelana kubhekisa kwiifayile zemifanekiso ngefomathi jpeg, bmp, tiff, gif, png kunye nokuluhlaza, ekubeni ke iyenye into elungileyo ngenxa yokuba ngayo, sinentsimi engcono yokunyanga olu hlobo lweengxaki.
Ngayo nayiphi na enye indlela esele siyikhankanyile, ungazama ukubuyisa iifoto ekunokwenzeka ukuba zazigcinwe kwindawo ethile ebonakalayo kwaye amacandelo abo onakele. Kubaluleke kakhulu ukuzama Sebenzisa iinguqulelo zesilingo ngaphambi kokuhlawula ilayisensi kuba ngekhe wazi ukuba siza kuba neziphumo ezisebenzayo ngokwenene ngaphandle kwebango elinokwenziwa ngabaphuhlisi balo.
Ukukhuphela - Ukubuyiswa kwePix 3
Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo kwi-Mac
Ukubuyiswa kweefoto zeStellar Phoenix
Isicelo esigqibeleleyo, esivela kubaphuhlisi abafanayo noguqulelo lweWindows ekhankanywe apha ngasentla, esivumela ukuba singabuyisi zonke iifoto ezikumacandelo amabi kwi-hard drive yethu okanye kwimemori khadi, kodwa ivumela ukuba sifumane kwakhona nayiphi na ividiyo okanye iifayile zomculo.
Ikwasivumela ukuba siphinde sibuyele kwiifoto, kwiividiyo okanye kwiifayile zomculo esizicimileyo ngaphambili, ke inokuba sisiphelo sobomi bethu ilungele naluphi na uhlobo lweemeko apho iinkumbulo zethu zichaphazeleka ngumgangatho ophantsi wenkqubo yokugcina okanye kuba yonakalisiwe ngokuhamba kwexesha.
Khuphela i-Stellar Phoenix Photo Recovery
Ukubuyiswa kweDatha yeSkysoft
Esi sesinye isicelo, kunye nesangaphambili, esibonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo ngaphakathi kwi-Apple ecosystem. Ukubuyiswa kweDatha yeSkysoft kusivumela ukuba sifumane kwakhona nayiphi na ifayile ekwicandelo elinesiphene kwidiski yethu okanye kwimemori khadi, kubandakanya iifoto, iividiyo, ii-imeyile, amaxwebhu, iifayile zomculo ... Ukongeza iyahambelana naso nasiphi na isixhobo esidibanisa nekhompyuter yethu, Sinokuyisebenzisa kwakhona ukufumana ulwazi ukusuka kwikhamera ehambelana nememori yangaphakathi okanye kwisiphelo se-Android apho iifoto kunye neevidiyo ezinokuphinda zifumaneke zikwimemori yesixhobo.
Khuphela iSkysoft Data Recovery
Ukubuyiswa kweDatha ye-OneSafe
Sigqibezela ukhetho lokufumana kwakhona imifanekiso okanye iividiyo ezonakeleyo kwizixhobo zethu nge-OneSafe Data Recovery, isicelo esisivumela ukuba siqhagamshele nasiphi na isixhobo kwi-Mac yethu ukubuyisa ulwazi olungaphakathi, nokuba iifoto, iividiyo okanye amaxwebhu alo naluphi na uhlobo.
Khuphela ukubuyiswa komhla we-OneSafe
Usetyenziso ukulungisa iifoto ezonakeleyo kwi-Android
I-ecosystem ye-Android isinika inani elikhulu lezicelo xa kuziwa ekufumaneni iifoto ezonakeleyo okanye nayiphi na idatha eyonakeleyo evela kwisiphelo sethu, kuba sinokufikelela kwingcambu yenkqubo nangaliphi na ixesha, into esingenakuyenza kwinkqubo yendalo esingqongileyo. UManzana. Ixesha elingaphezulu, iinkumbulo zokugcina ziya zisiba mbi, ngakumbi ukuba aziveli kwiimpawu ezaziwayo, kungoko kusoloko kucetyiswa ukuba uchithe imali encinci kwaye tyala imali kukhuseleko lwethu lwengqondo.
Isicelo sokuBuyisa ifoto sisivumela ukuba sifumane iifoto ezifumaneka kumacandelo amabi ngeendlela ezimbini Esiza kufumana iziphumo ezilungileyo kakhulu, nangona imemori apho iifoto zibekwe khona yonakele, akukho sicelo okanye nayiphi na enye into enokwenza imimangaliso. Indlela yokuqala isebenzisa ialgorithm yokubuyisela yeyona isinika iziphumo ngendlela ekhawulezileyo nesebenzayo. Okwesibini kuyacetyiswa xa owokuqala enganikanga ziphumo zilungileyo ngenxa yokonakala kwememori yangaphakathi okanye i-SD apho imifanekiso ikhoyo inokubakho.
Umthuthukisi: I-Blueberry PI emnandi
Ngelixa kuyinyani ukuba inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwiifoto ezonakalisiweyo okanye ezicinyiweyo icotha, le sicelo Yenye yezo zisinika ezona ziphumo zibalaseleyo. Nje ukuba ubuyisele iiFoto, isicelo senza uskelo olupheleleyo lwazo zonke iinketho zeememori, ngaphakathi nangaphandle. Ngokungafaniyo nezinye iiapps ezifuna iimvume zengcambu, ukubuyiswa kwesithombe kwenza umsebenzi oncomekayo ngaphandle kwesidingo.
Buyisela umfanekiso weefoto
Umthuthukisi: LIU DEIHUA
Ukufumana kwakhona imifanekiso ecinyiweyo akusivumeli nje kuphela ukuba sikrole ngaphakathi kwetheminali yethu ekukhangeleni imifanekiso esikwazileyo ukuyicima ngempazamo, kodwa kukwajongana nokukhupha yonke loo mifanekiso yonakaliswe yimeko yecandelo lememori apho bafumaneka. Njengasicelo sangaphambili, iyahambelana nazo zonke iifomati zemifanekiso kwaye ayifuni mvume yengcambu nangaliphi na ixesha ukuze ikwazi ukwenza umsebenzi wayo, umsebenzi ngendlela yenza ngokufanelekileyo.
Izicelo zokulungisa iifoto ezonakeleyo kwi-iPhone
Inkqubo yendalo ka-Apple ayikaze ibonakaliswe njengenye yezona zivulekileyo kwintengiso, ngokuchaseneyo. Ukukwazi ukufikelela kwingcambu yesixhobo sethu ngumsebenzi oseleyo ithotyelwe kuphela kwabo basebenzisi benzayo kwisixhobo sakho, ukuqhekeka kwentolongo okuya kusiba nzima ukufezekisa, kuba uninzi lwabaphangi ababezinikele kulo msebenzi baye kwicandelo labucala ukuya kufumana umvuzo kwimisebenzi yabo yophando ukufumana ukuba sesichengeni kwenkqubo. Ngenxa yokusikelwa umda okusinikayo, eyona nto sinokuyenza ukunqanda ukuba nengxaki ngesixhobo sethu kwaye singenakho ukubuyisa iifoto esinazo kuso, kukusebenzisa inkonzo yokugcina ilifu ekhathalayo. yenza ikopi yazo zonke iifoto nevidiyo esizenzayo.
Kwimarike asifumani zicelo zivumela thina okanye ubuncinci ibango lokusivumela ukuba sibuyise idatha kwi-iPhone yethu ukuba iyekile ukusebenza ngokuchanekileyo. I-EaseUS MobiSaver, isicelo esihlawulelweyo, kodwa esivumela ukuba sizame ingxelo yasimahla, esinokuthi ngayo fumana naluphi na uhlobo lolwazi kwisixhobo sethu seApple Logama nje ingonakaliswanga kakhulu kwaye iPC okanye iMac iyayibona xa siyifaka, nokuba isikrini asikhanyisi okanye asinike zisebenze. Enkosi ku-EaseUS MobiSaver sinokuphinda sibuyele kwiifoto kunye neevidiyo, kunxibelelwano, fowuna imbali, ii-bookmark ze-Safari, imiyalezo, izikhumbuzo, amanqaku ... Xa siqhagamshela i-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch kwikhompyuter yethu, usetyenziso luya kusinika ukubuyisa ukhetho: ukusuka kwindawo yogcino iTunes (ekufuneka siyenzile ngaphambili) okanye ngqo kwisixhobo sethu.
Khuphela i-EaseUS MobiSaver
Ngaba uyazi ngakumbi iinkqubo ze lungisa iifoto ezonakeleyo? Yeyiphi oyisebenzise ngempumelelo? Sitshele ngamava akho kunye nenkqubo oyilandeleyo yokufumana iifoto ezonakeleyo nangasiphi na isizathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Lungisa iifoto ezonakeleyo
Umxholo uluncedo kakhulu kwaye unolwazi
UAlbert Costil sitsho
Into eluncedo engakholelekiyo! Imifanekiso yam emininzi ye-jpg ifunyenwe.
Phendula ku-Albert Costil
Molo Albert, yeyiphi kubo onokuyifumana kwakhona?
NGOKUPHI INKQUBO OBUYIBUYISELEYO IMIFANEKISO YAKHO. OKWENZEKA KUM KUKUBA KUBONAKALISWE UMBONAKALO WOMFANEKISO KUPHELA, EYONKE OKUQINISEKILEYO
Akukho namnye undikhonzileyo. Imifanekiso yonakele xa ndibeka ikhadi le-sd lekhamera kwikhompyuter, yaphahlazeka kwaye kwafuneka ndiyikhuphe, xa ndaphinda ndadibanisa iifoto zonakele. iwindows image viewer indixelela umfanekiso ongalunganga.
URiki kwenzeka into efanayo kum, i-micro sd yam yonakalise iifoto zam kunye neevidiyo, evunyiwe ngeenkqubo ezininzi kodwa zonke zizokubuyisa iifoto ezisusiweyo ukuze zingafumani iifoto ezonakaliswe yi-micro sd… .. Ukuba umntu uyakwazi ukulungisa ezonakeleyo. iifoto, ndincede.Iifoto zomhla wokuzalwa wabazukulwana bam ababini, ndingazixabisa kakhulu
URiki kwenzeka into efanayo kum, i-micro sd yam yonakalise iifoto zam kunye neevidiyo, kuvavanyiwe ngeenkqubo ezininzi kodwa zonke ziyafumana iifoto ezisusiweyo ukuze zingafumani iifoto ezonakaliswe yi-micro sd… .. Ukuba umntu uyazi lungisa iifoto ezonakeleyo ndincede ngoku Ziyifoto zomhla wokuzalwa wabazukulwana bam ababini ndiya kubaxabisa kakhulu
UCarmen rosa sitsho
Molo, kwenzeka into efanayo kum neefoto ezikwikhadi ukuze ulidlulisele kwikhompyuter, liqale lodwa kwaye andinakho ukuvula iifoto, kwaye nokuba zingaphi iinkqubo ezingenzi nto, ndidanile, ufumene Inkqubo yokubuyisa iifoto zakho, ndingavuya kakhulu ukuba ungandinceda, enkosi
Phendula Carmen Rosa
molo kwimeko yam iifoto ezivulekileyo ngombonisi wewindows kodwa imivimbo engwevu okanye imikrwelo ibonakala kwiifoto eziyiloo nto ndiyifunayo kodwa akukho nanye kwiinkqubo ezisisombululayo
luis miguel copa arias sitsho
Njengoko i-agi ikwenza ukuba uphinde ufake iifoto zam ndamnika ukuba ahambe kwimemori khadi kwaye imifanekiso yaphuma inophawu lwe-amiracion kunye nomnyama kunye nezinye iziqwenga x endinokuzenza xfavor ndincede xfa xfa abahlobo nabahlobo iifoto zibaluleke kakhulu xfavor
Phendula u luis miguel copa arias
Izicelo ezi-4 zasimahla, kodwa lumka, kuya kufuneka uthenge ilayisensi ehlawulelweyo ukuze uzisebenzise xD
BONKE bahlawulwe, akukho namnye kubo okhululekileyo, kuzo zonke kufuneka uhlawule kwaye ngaphezulu koku kunokwenzeka ukuba azincedi ...
I-200 MB SIMAHLA KWIINKCUKACHA ZEDATHA ZAMAHHALA ZOKUQHUTYWA KWEENKQUBO EZILUNGILEYO KUNYE NOKUFANELEKILEYO KUNYE NESOFTONIC EYAVUMELA UKUBA UFUMANE I-200 MB OKUNGAKUMBI. IINKQUBO EZIMBINI ZI-SOFTONIC.